Teboka vavaka hanoherana ny fanahy an-dranomasina | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Teboka vavaka hanoherana ny fanahin'ny ranomasina
Androany isika dia hiatrika teboka vavaka mifanohitra amin'ny fanahy an-dranomasina. Fanahy an-dranomasina dia mpandraharahan'ny haizina avy any amin'ny ranomasina na ranomasina. Mampiasa ireo masoivoho ireo ny fahavalo hanaraha-maso ny fitomboan'ny olona ary hampidina azy ireo amin'ny alàlan'ny fomba na fomba maro samihafa. Mahaliana anao ny mahafantatra fa manafika olona mifototra amin'ny karazana fanekena misy eo amin'izy ireo sy ireo tra-boina ireo.
Misy tranga izay, ray aman-dreny mankanesa any amin'ny fanahy ao anaty rano mangataka zaza manadino fa ny fanomezana tsara rehetra dia avy amin'Andriamanitra irery ihany. Rehefa maniry ho tonga lehilahy sy vehivavy ireo dia manomboka miaina olana amin'ny tontolo an-dranomasina. Izany dia rehefa maheno tranga misy ny lehilahy manambady na fanahy fanahy ianao. Misy fomba hafa ahafahan'ny lehilahy iray iharan'ny herin'ny Fanahy an-dranomasina. Ny iray amin'ireo fomba mahazatra dia amin'ny alàlan'ny ota ota.
Tsarovy Andriamanitra dia nandidy ny tsy hanitsakitsa-bady na hijangajangana. Ny iray amin'ireo antony nampianaran'Andriamanitra ny zanany hiala amin'ny fahotana ara-nofo dia ny famonjena azy ireo amin'ny fieren'ny fanahin'ny ranomasina. Ny firaisana ara-nofo dia endrika Fifanekena misy ra. Rehefa mandry amin'ny vehivavy avy amin'ny tontolo an-dranomasina ny lehilahy, na manambady na tokan-tena, dia nanao fanekena taminy tsy nahy izy. Izany no antony hitantsika amin'izao tontolo izao ankehitriny fa ny lehilahy no iharan'ny herin'ny tafika an-dranomasina lehibe indrindra.
Ireo fanahy ireo dia mety hiteraka krizy ara-bola mahatsiravina amin'ny fiainan'ny lehilahy. Hivavaka amin'Andriamanitra izy ary hifady hanina nefa tsy hisy izany. Ny lehilahy toy izany dia handeha hanao dinidinika amin'ny asa lehibe, hamaly tsara ny fanontaniana rehetra nefa tsy hahazo ilay asa izy. Ny fikambanana dia hanome ny asa amin'ny olon-kafa afa-tsy izy. Ary koa, ny fanahy an-dranomasina dia mety hisy fiantraikany amin'ny fanambadian'ny olona. Voalohany, mety hanakana ilay olona tsy hahita vady hiara-honina aminy ary na dia manambady aza izy amin'ny farany dia mety tsy manan-janaka izy ireo. Ny tranga hafa dia mety tsy ho fantatry ny vadin'ny olona ampijalian'ny fanahy an-dranomasina fitsaharana ao amin'io fanambadiana io.
Misy fomba isan-karazany mampijaly ny rembiny ireo fanahy mahatsiravina ireo. Androany Andriamanitra dia hanafaka anao amin'ny fandriky ny fanahin'ny ranomasina. Handrava ny fihazonana ny fanahin'ny ranomasina amin'ny fiainanao Izy ary hampiorina ny fahafahanao. Raha manana nofy tsy tapaka ianao fa manao firaisana amin'ny vehivavy ao anaty rano na mahita ny tenanao sahirana eo afovoan'ny ranomasina mahery dia famantarana lehibe fa ampijalian'ny fanahin'ny ranomasina ianao. Andao isika hiara-mivavaka amin'ny fampiasana ireto teboka vavaka manaraka ireto.
Ry Andriamatoa Tompoko, mahafo ny fiarahana rehetra, ny fifandraisana rehetra misy amiko sy ny tontolo an-dranomasina ankehitriny, amin'ny anaran'i Jesosy. Nosarahiko tamin'ny hery tamin'ny anaran'i Jesosy ny fampakaram-bady rehetra eo amin'ny fanambadiana sy ny tontolo an-dranomasina.
Tompoko, miala amin'ny fanekempihavanan'ny demonia rehetra misy eo amiko sy ny tontolon'ny ranomasina aho, miala amin'ny fanekena toy izany aho anio amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, manafaka ny afon'Andriamanitra Tsitoha amin'ireo mpandraharaha an-dranomasina rehetra izay manara-maso ny fiainako aho, manapa-kevitra ny ho faty amin'ny anarany Jesosy.
Tompoko, ny fanekena ratsy rehetra nataoko tamin'ny tsy fahalalana noho ny fahotako, mivavaka aho mba handevanan'ny faneken'Andriamanitra ny fanekempihavanana toy izany amin'ny anaran'i Jesosy. Mampiasa ny ra izay miteny ny marina noho ny ran'i Abela aho handringanana ny fanekena ratsy rehetra amin'ny fiainako anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny voa rehetra amin'ny tontolo an-dranomasina ao amin'ny rafitro, aringako amin'ny afo anio. Ny voa demonia rehetra izay napetraka tato amiko avy amin'ny tontolo an-dranomasina, dia mivavaka aho mba handevonan'Andriamanitra ny afo amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Andriamatoa Tompoko, mamela ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ireo mpandraharaha an-dranomasina rehetra aho, izay manafika mandritra ny fiainako anio amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny soratra masina rehefa miantso ny anaran'ny Tompo aho, dia handositra ny fahavaloko. Tompoko, miantso anao aho anio, mivavaka aho mba hampiala ny fanahy an-dranomasina rehetra hiala eo imasoko anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny olana rehetra nahazo ahy tamin'ny fifandraisako tamin'ny fanahy an-dranomasina dia manimba anao anio amin'ny anaran'i Jesosy aho. Tompoko, ny olana sy ny olana atrehako rehetra noho ny fifandraisako amin'ny fanahin'ny ranomasina dia mivavaka aho mba hahazo vahaolana haingana amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, izay fanodikodinana rehetra eto amin'ny tontolo an-dranomasina noho ny fanambadiako dia aringako ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, ny fandaharam-potoana rehetra eto amin'ny tontolo an-dranomasina noho ny fanambadiako dia simban'ny afon'ny fanahy masina.
Tompoko, avelako ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny vady na vady an-dranomasina rehetra manakana ahy tsy hipetraka eo amin'ny fiainana. Mivavaka aho mba hisarahana fisarahana avy amiko sy ny vady an-dranomasina amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray tompoko, mivavaka aho mba hanaovana batemy afo vaovao hanova izay rehetra mikasika ahy ka handoro ny zava-dratsy rehetra manodidina ahy ho lavenona amin'ny anaran'i Jesosy.
Jesosy Tompo ô, ny fitahiana sy ny harena rehetra izay nangalariko ka notazomiko tao amin'ny bokin'ny ranomasina, dia mivoaha ka manatona ahy amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, tahaka ny nahitanao ny famaky latsaka tao anaty rano, mivavaka aho mba ho hitanao amin'ny fomba mahagaga ny harena rehetra nangalarin'ny tontolon'ny ranomasina tamiko tamin'ny anaran'i Jesosy.
Tompoko, ny didim-pitsarana sy ny didim-pitsarana rehetra eto amin'ny tontolo an-dranomasina dia rava amin'ny anaran'i Jesosy. Manome didy aho fa ny fitsaran'Andriamanitra dia hijoro amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy. Fa efa voasoratra hoe: Iza no miteny, ary tsy tonga Andriamanitra, raha miteny Izy? Manafoana ny didim-pitsarana rehetra eto amin'ny tontolo an-dranomasina amin'ny anaran'i Jesosy aho.
Tompoko, ny biby anaty rano rehetra nalefa taty amiko avy amin'ny ranomasina dia mandidy anao aho mba hamono ny tenanareo anio amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy ny menarana rehetra avy amin'ny tontolo an-dranomasina nalefa hitelina ny fitahiako aho aho, hamono tena anio amin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hialana amin'ny famoizam-po amin'ny maha mpino anao
Next lahatsoratraAntony 5 iainantsika fakampanahy
Teboka 30 amin'ny fotoam-bavaka rehetra